एसएलसीको उपद्रो - परिहास - नेपाल
सर्वोच्च अदालतका एक श्रीमान्को एसएलसीको प्रमाणपत्र गायब भएको लाल कुमालले सुन्यो । न खुसी हुन सक्यो, न त दु:खी हुन सक्यो । होइन, अहिलेको जमानामा के काम छ एसएलसीको ? हरेक वर्ष लाखौँ एसएलसीवाला निस्कन्थे । तिनीहरुले काम त परै जाओस्, कलेजसमेत पाएनन् । एसएलसी फालाफाल भएपछि सरकारलाई नयाँ आइडिया फुर्‍यो, एसईई । एसईई आएपछि श्रीमान्ले पुरानो के काम भनेर निकाल्दे होलान् या आफैँ भारततिर भासियो होला ।
न्यायाधीश भइसकेको मान्छेलाई किन चाहियो एसएलसीको कागज ? आईएल, बीएल, एलएलएम हुँदाहुँदै जाबो एसएलसीमा किन कोकोहोलो ? एमडी गरेका डाक्टरलाई पनि एसएलसीको उपद्रो लगाएकै हुन् । उनीहरुलाई पनि अदालतले ‘क्लिन चिट’ तेर्साइसक्यो । जाबो एसएलसी पास गर्नैपर्छ र ? एसएलसी पनि कुनै योग्यता हो र भन्या !
प्रकाशित: वैशाख २७, २०७४
सत्तामा ढुंगा नहानौँ
दोषी जुत्ता !
दुई नम्बरी छलाङ
घाँस–दाउरामा सिन्डीकेट !
बल गरौँ मेयरसाप
दाल गल्यो कमरेड
‘किक कोर्स’ चाहियो